Eating Spree Episode2– Yakitori Chicken BBQ In:Kawi Eats, Videos
ကဝိ Eats ကနေ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Eating Spree အစီအစဉ်ရဲ့ Episode2လာပါပြီ။ Episode 1 တုန်းက ကဝိရဲ့ host တွေဖြစ်တဲ့ Phyo နဲ့ Elena တို့က Cheese O’Tea ဆိုတဲ့ Bubble Tea ဆိုင်အသစ်လေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒီ Episode2မှာတော့ Phyo နဲ့ Elena တို့က Yakitori Chicken BBQ ဆိုတဲ့ ဂျပန်စတိုင် အကင်တွေကို ရောင်းချပေးနေတဲ့ ဆိုင်လေးကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရသာအလွန်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို သူတို့တွေ ဘယ်လိုတောင် အားရပါးရ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားကြလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ကြည့်လိုက်နော်။ ညဘက် ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်နဲ့ ကြုံသွားလို့ သူတို့ကိုကြည့်ရင်း သွားရည်ကျလာရင်တော့ မသိဘူးနော်!!! 🤤🤤🤤😋😋😋 နောက်ထပ် Eating Spree အပိုင်းတွေလည်း ထပ်လာဦးမှာမို့လို့ စောင့်ကြည့်ပေးကြဦးနော် ! ...
ကြက်သားခရမ်းသီးချက် ချက်ပြုတ်နည်း In:Kawi Eats, Videos
ကြက်သားရယ်၊ ခရမ်းသီးရယ်၊ ငပိရယ်နဲ့ ပေါင်းပြီးချက်ထားတဲ့ ဟင်းလေးကတော့ ပူပူစပ်စပ်နဲ့ မိုးရာသီမှာ အရမ်းစားကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ 🤤🤤🤤 ဒီတော့ ကဝိက စားစေချင်လွန်းလို့ အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူချက်ပြုတ်စားလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပြီနော် 🤗🤗🤗 ...
Eating Spree Episode 1 – Cheese O’ Tea သို့အလည်တစ်ခေါက် In:Kawi Eats, Videos
ကဝိ Eats ကနေ အသစ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Eating Spree ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရဲဲ့ ပထမဆုံး အပိုင်းအနေနဲ့ ကဝိရဲ့ host တွေဖြစ်တဲ့ Phyo နဲ့ Elena တို့က Cheese O’Tea ဆိုတဲ့ Bubble Tea ဆိုင်အသစ်လေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်သောက်နေကျ bubble tea တွေထက် တစ်မှုထူးခြားတဲ့ cheezo လို့ခေါ်တဲ့ ချိစ့်အမြှုပ်လေးတွေပါတဲ့ bubble tea လေးတွေရဲ့ အရသာကတော့… 🤤🤤🤤😋😋😋 အောက်မှာပဲကြည့်လိုက်တော့နော်။ နောက်ထပ် Eating Spree အပိုင်းတွေလည်း ထပ်လာဦးမှာမို့လို့ စောင့်ကြည့်ပေးကြဦးနော် ! ...
ပုဇွန်မာလာခေါက်ဆွဲပြုတ်ချက်နည်း In:Kawi Eats, Videos
ဒီနေ့မှာတော့ မိုးအေးအေးလေးမှာ အပီလွေးလို့ရမယ့် ပုဇွန်မာလာခေါက်ဆွဲဲပြုတ်ချက်နည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ! လုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူတော့ ခုပဲသွားဝယ်ပြီးချက်လိုက်တော့ဗျာ! ...
Mini Nutella Pancakes In:Kawi Eats, Videos
ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း lunchbox လုပ်နည်းလေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျ! ဒီတစ်ခေါက်တော့ အထူးအဆန်းဖြစ်အောင် mini nutella pancake လေးလုပ်ထားပါတယ်။ အမြဲတမ်းထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပဲစားနေရတာ ပျင်းလာတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့! ဝါးလိုက်ရင်အထဲက စိမ့်ထွက်လာမယ့် Nutella ချောကလက်အရည်လေးတွေရယ်…အအီပြေစားဖို့ ကီဝီသီးလေးတွေရယ်ဆိုတော့ 😋😋😋🤤🤤🤤 ...
Smoothies of the Month(May Edition) In:Kawi Eats, Videos
ချွေးတွေထွက် ရင်တွေပူနေချိန်မှာ အသီးဖျော်ရည်အေးအေးလေး သောက်လိုက်ရတဲ့ feeling လေးကိုအားလုံးကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကဝိကနေပြီးတော့ သရက်သီး နဂါးမောက်သီး ကီဝီသီး စတဲ့အသီးတွေကို အသုံးပြုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖျော်သောက်လို့ရတဲ့ smoothie လုပ်နည်းလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရသာလည်းရှိ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ဆိုတော့……. woooooow ရှလွတ်ပဲပေါ့! ...
ထိုင်းစတိုင် Red Curry ကြက်သားဟင်းချက်နည်း In:Kawi Eats, Videos
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ထိုင်းစတိုင် Red Curry ကြက်သားဟင်းချက်နည်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်! 🍛🍛🍛🥘🥘🥘 ထမင်းဘူးထုတ်လေ့ရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ချက်ပြုတ်လို့ ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့… – ကြက်သား – Red Curry ဟင်းအနှစ်– အုန်းနို့– ငရုတ်ပွ– ငရုတ်သီး– ပင်စိမ်း– ငါးငံပြာရည်– သကြား– ဆီ– ရေ စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို City Mart Supermarket တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဆိုင်အထိသွားမဝယ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ City Mall Online ကနေမှာယူပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ခိုင်းလို့လဲ ရပါတယ်နော်! ...